2 Ọrịa obi / Ọrịa Obi - Ọgwụ Ọrịa
Ọrịa obi na-emetụta obi, veins, akwara, na mgbasa ọbara na nri n’ime ahụ niile. Echere na ihe ruru 80 pasent nke ọrịa obi niile nwere mmalite dịka ya ọrịa nje nke ahụ sitere n’ọnụ.
Ọrịa obi nwere ike ibute ọrịa nje dịka ọrịa akpịrị ma ọ bụ ọrịa staph. Site na ichipu eze na ShopFreeMart NVIRO Shave na Shower Gel Na-eme ka ihe jupụta na mmiri jupụta n’ọnụ PureSilver mmiri, ị nwere ike igbu nje ndị ahụ na goms na-ebute ọrịa obi. Nke a ga - egbukwa nje ndị na - akpata ọrịa chịngọm na iku ume ọjọọ.
Ọrịa akụrụ nwekwara ike ịbụ ihe na-akpata ọrịa Ọrịa Obi. Mgbe akụrụ enweghị ike iwepu nsị zuru ezu ma mee ka ahụike gị, ala lara n'iyi, nke nwere ike ime ka ị na-arịa ọrịa ga-ewulite ogo gị nke ukwuu, na-akpata oke nje. Ọ bụrụ na agwọghị ya, ị nwere ike ịmalite inwe nsogbu dịka ọbara mgbali elu, anaemia (ọnụọgụ ọbara), ọkpụkpụ na-esighi ike, ahụike na-adịghị mma na mmebi akwara. Ọzọkwa, ọrịa akụrụ na-eme ka ị nwekwuo ọrịa obi na ọrịa arịa ọbara.
Ọrịa obi / Ọrịa Obi - Ọgwụ Ọrịa
Iri isii nke ShopFreeMart Hydration Drops mesiri agbakwunyere na galọn ọ bụla mmiri ọilledụ drinkingụ na-egosipụta na ọ ga - enyere aka wepu nsí na akụrụ ma belata ọkwa creatine na mmamịrị. (Lee Ọrịa Akụrụ)
Ndị na-adịghị arụ ọrụ yikarịrị ka ha ga-enweta oke ibu n'ihi na ha anaghị ere ọkụ nke ihe ọ andụ takeụ na-aba n'anya ha. Ndụ adịghị arụ ọrụ na-ewelite ike gị maka ọrịa obi, ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, kansa eriri ala, na nsogbu ahụike ndị ọzọ.
Magnesium na-ebelata ihe ize ndụ nke nkụchi obi na ShopFreeMart PureMag bụ akara m na-atụ aro. Ọla kọpa dịkwa mkpa maka imepụta ọbara na arịa dị mma. ShopFreeMart PureCopper bụ ihe kachasị mma achọpụtara m iji nyere gị aka mee ka ọbara na arịa ọbara gị na arụmọrụ kachasị elu. Flọ ahịa ahịaFreeMart PureMag, PureCopper na D-Cal nwekwara ike inye aka rụkwaa mkpụrụ ndụ endothelial n’arụ ọbara ma belata akwara nke akwara ozi.
(Lee Ọrịa akwara / Ọbara ọbara / Ọbara. Maka isiokwu ndị ọzọ metụtara Ọrịa Obi. Lee shuga / Partisonụ Ahụhụ.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-atụpụta netwọkụ akwara maka nchọpụta arrhythmia nke klaasị
Omume iri nri mara nma na nwata nwere ike belata ihe oke nke oke ibu na oria obi
Otu ụzọ nha ga-esi rụkwa ọrụ maka ịgwọ ọbara mgbali elu n'afọime
Ihe na Ọrịa obi, Ọrịa akwara, Ọrịa Aspartame, ọbara Circulation, Ọrịa Obiakpado anaemusi, mmịnye ọbara, ọrịa obi, Ọrịa obi obi ọgwụgwọ, ọrịa obi na ọrịa, ọgwụgwọ ọrịa obi na ọgwụgwọ ọgwụgwọ na ọgwụgwọ ọrịa obi, ọbara na-adịghị mma, shop shopmart purecopper, Shoplọ ahịaFreeMart PureMag, shopfreemart puresilver itinye uche
One chere na "Ọrịa Obi / Ọrịa Obi Ngwọta Ahụike Na Ọgwụ"
Pingback: Qukwụsị okingokingụ Sịga Uru - Ọkọlọtọ NH